Maitiro ekupinza zvigadzirwa kuPrestaShop nenzira yakapusa | ECommerce nhau
Sezvaunoziva, Prestashop Icho chinoshanda kwazvo ECommerce chishandiso kuwedzera kutengesa kwako, uye inoshanda kwazvo kushandisa.
Asi kuyedza kurongedza zvigadzirwa dzimwe nguva zvinombovhiringidza, uye zvakanyanya kana zvasvika pakuisa katarogu yakakura kwazvo yezvigadzirwa, saka pazasi isu ticha tsanangura kuti sei kupinza zvigadzirwa kuPrestaShop.
1 Matipi akakosha ekupinza zvigadzirwa kuPrestaShop:
2 Nhungamiro yekuunza zvigadzirwa kuPrestaShop
2.1 Vhura iyo CSV faira
2.2 Maitiro ekuzadza iyo CSV template yePrestaShop zvigadzirwa
2.3 Inobatsira ficha kune vekunze tsamba vanotakura uye vatumira.
3 Sevha iyo CSV template
4 Kuisa iyo template nezvigadzirwa kuPrestaShop
Matipi akakosha ekupinza zvigadzirwa kuPrestaShop:
Gadzira zvikamu zvatinoda tisati tatanga kupinza zvigadzirwa kuPrestaShop.
Dhawunirodha muenzaniso we CSV faira usati waizadza mukati senge mamiriro esangano anowanzochinja. Iwe unogona kuwana muenzaniso nekudzvanya pane iyo Backoffice / Yepamberi Maparamende / Kunze CSV sarudzo.
Ita shuwa chengetedza iyo CSV mune kwayo chaiyo fomati.
Zvinokurudzirwa kuti mufananidzo wega wega wakadzikwa unorema kupfuura 500 kb uye wakakura kupfuura 70cm x 70cm.
Mifananidzo yaunoda kuwedzera inofanira kunge yakachengetedzwa ine zita chairo, pasina kuisa nzvimbo uye nemhando .jpg o .png.
Edza kuunza chigadzirwa chimwe chete kuti uone kuti chinoshanda uye chii chaunofanirwa kugadzirisa.
Kana iwe uchida kuendesa zvigadzirwa ku PrestaShop 1.7 nekukurumidza uye nyore.
Nhungamiro yekuunza zvigadzirwa kuPrestaShop
Vhura iyo CSV faira
Tinofanira kutanga tavhura iyo faira ichave yedu template yatinofanira kuzadza. Inofanira kutorwa pasi sezvakatsanangurwa mudanho rapfuura.
Patinovhura iyo .CSV faira Nechirongwa cheHofisi, Excel inotiratidza meseji yekukanganisa. Kwatichazofanira kupindura seinotevera:
Pamashoko ekutanga tinobaya pana "Hongu".
Pamashoko echipiri tinodhinda "Kwete".
Pamashoko ekupedzisira, tinya pane "Gamuchira" sarudzo.
Maitiro ekuzadza iyo CSV template yePrestaShop zvigadzirwa
Musana "A", Ndeya ID, inova ndiyo nhamba yekuzivisa yechigadzirwa chimwe nechimwe. Tinogona kusiya iyi ikholamu isina kuzadzwa, nenzira iyi ID ichagadzirwa otomatiki. Saka zvirimo mukoramu iyi zvinosarudzika.
Musana "B": Inoshanda: (0 = HAPANA; 1 = EHE) Nokusingaperi, inofanirwa kuiswa kune 1 kuitira kuti chigadzirwa chionekwe muchitoro chepamhepo. Kana 0 yapinda, chigadzirwa hachichazoonekwe.
Musana "C": Zita rakasarudzika yechigadzirwa
Musana "D”: Mazita ezvikamu izvo chigadzirwa chichaonekwa mukati mePrestaShop. Tinokurudzira kuisa ID yechikamu kuti izviite nekukurumidza uye nemukana mushoma wekukanganisa. Iwe unogona kusanganisira akati wandei mapoka akapatsanurwa nekoma imwechete, haufanire kushandisa nzvimbo pakati pawo.
Musana "E": Mutengo Usisanganisi VAT: Sezvo iyo mitero ichawedzerwa mukolamu inotevera.
Musana "F”: Mutemo wemitero, isa pano mari inobhadharwa pachinhu chimwe nechimwe.
Musana "G": Iyi mbiru inosarudzika, apa unogona kusanganisira Mutengo Wakawanda.
Musana "H"Mune izvi iwe unonyora kana chigadzirwa chiri kutaurwa chiri kutengeswa kana kwete, saka unofanira kunyora (0 = HAPANA; 1 = EHE) kuti zvinhu zvako zvioneke mukutengesa kwekutengesa.
Musana "I": Kukosha kwemutengo une zvigadzirwa zvakadzoserwa. Inofanira kugadzirisa otomatiki kana muzana yapinda mukolamu inotevera.
Musana "J”: Peresenti yemutengo iyo inozoshandisirwa kukosha kwese kwechinhu.
Makoramu "K"Uye"L": Izvi zvinosimbisa nguva iyo iyo Discount iri mubvunzo ichave inoshanda, ichipa zuva rekutanga mukoramu (K) uye zuva rekupedzisira rekusimudzira (L), unofanirwa kuiisa nemhando yacho YYYY-MM-DD. Risiye risina chinhu kana chinhu chacho chisiri kutengeswa.
Musana "M": Referensi nhamba
Musana "N”: Nhamba yekutengesa
Makoramu "O"Uye"P": Iye mupi akagoverwa mu (OR) uye mugadziri mukoramu (P)Column inofanirwa kuzadzwa neID yemutengesi kana mugadziri ari kutaurwa.
Musana "Q"EAN-13 nhamba yakaiswa mukoramu iyi. Iyi ndiyo nhamba yebhakhodhi, iyo inoumbwa nenhamba gumi nenhatu, nechinhu chinozivikanwa nacho.
Musana "R": UPC: Iyo yanga yakafanana neEAN-13 kuNorth America, inosanganisira barcode, iyo isingawanzoonekwa kuSpain.
Musana "S”: Iyi ndiyo green tax, iwe unogona kuisiya isina chinhu.
Makoramu "T","U","V"Uye"W": Mune izvo zviyero zvechinhu chiri kutaurwa zvakapindirwa, Hupamhi mukoramu (T), Kureba mu (U), Kudzika mu (V) uye Kurema mukoramu (W):
Inobatsira ficha kune vekunze tsamba vanotakura uye vatumira.
Musana "X": Huwandu hwehuwandu hwatinahwo muStock yeichi chigadzirwa. Inotenderwa chikamu.
Musana "Y": Hushoma huwandu: Hushoma huwandu hwechigadzirwa chiri kutengeswa. Isa 1 nekukasira.
Musana "Z": Nokutadza siya koromo isina chinhu.
Musana "AA”: Mari yekuwedzera yauchabhadharisa chimwe chigadzirwa
Musana "AB”: Chikwata chechigadzirwa
Musana "AC”: Mutengo weChikamu chimwe nechimwe.
Musana "AD”: Tsananguro pfupi yechigadzirwa.
Musana "AE”: Tsanangudzo yakawedzerwa yechigadzirwa.
Musana "AF": Zviri nezvekusanganisira mazwi akakosha avanogona kutsvaga nawo chigadzirwa. Matagi avanogona kunongedzera kuchinyorwa.
Makoramu "AG","AH"Y"AI": Meta-musoro mukoramu (AG), Meta-keywords mukoramu (AH) uye Meta-tsananguro mukoramu (AI): Iyi munda ndeyekumisikidza zvigadzirwa muInternet ekutsvaga injini. Zadza chinyorwa pamusoro pechigadzirwa.
Musana "AJ": Izvo zvinobva zvagadzirwa neyakagadzirwa zita rakaparadzaniswa nemahedheni. Zvinokurudzirwa kuti usachinje chero chinhu mune izvi.
Musana "AK”: Rugwaro rwekuti ruripo.
Musana "AL": Zvinyorwa zvemashure kumashure
Musana "AM": Kuwanikwa kwekutumirwa (0 = HAPANA; 1 = EHE)
Makoramu "AN"Uye"AO"Mazuva ekuwanikwa uye kusikwa kwechigadzirwa, kazhinji zvinosiiwa zvisina chinhu."
Musana "AP": Kana iwe uchida kuti mutengo uoneke, unofanira kunyora 1, kana iwe usiri kuda kuti mutengo uratidze, nyora 0.
Musana "AQ": Unganidzo yemifananidzo iwe yaunoda kuisa kune icho chigadzirwa. Iwe unogona kusanganisira akawanda mifananidzo akapatsanurwa nekombi imwechete, isina nzvimbo. Kuti uvazivise mufaira reCSV, tichavanyorera semafomu emuenzaniso uyu ./upload/DSCF1940.jpg
Musana "AR"Bvisa mifananidzo yaimbovapo muchinyorwa (0 = HAPANA; 1 = YES)
Musana "AS": Hunhu hunofanirwa kupatsanurwa nemakoma kwete nenzvimbo.
Musana "AT": Ichanyorwa kana chinyorwa ichi chichiwanikwa chete pamhepo (0 = HAPANA; 1 = HUNGU).
Musana "AU": Chigadzirwa mamiriro: Mauri iwe unofanirwa kuratidza kana chigadzirwa chiri CHITSVA, CHINOSHANDISWA kana CHINODZIDZISWA, Inesarudzo ikholamu.
Musana "AV": Kuti uone kana chinyorwa chacho chichigadziriswa kana kwete, saka iwe ucharatidza ne 1 kana ichigadziriswa kana" 0 "kana chigadzirwa chacho chisingaiti. Siya isina chinhu kana chigadzirwa chisinga gadziriswe. Kana icho chigadzirwa chichigadziriswa, chinyorwa bhokisi rinoratidzwa pane chigadzirwa chigadzirwa kuti mutengi agone kuchizadza.
Musana "AW"Yakabatanidzwa faira (0 = Kwete, 1 = Hongu)
Musana "AX": Inoratidzwa ne" 1 "kana tichida kuratidza mameseji ezvinyorwa kuitira kuti mutengi anyore kwatiri kana" 0 "kana tisingade kugashira chero mhando yemashoko.
Musana "AY": Maka" 1 "kubvumidza maodha, kunyangwe pasina Stock, kana mucherechedzo 0 kana tisingade kuvabvumidza kuti vahodhe kana chigadzirwa chisisipo.
Musana "AZ": Zita rechitoro kana brand.
Ukangopedza kuzadza iyo ruzivo mumakoramu, isu tinofanirwa kusevha iyo faira.
Sevha iyo CSV template
Kudzvanya floppy kusevha iyo faira.CSV Muchirongwa cheExcel tichawana meseji.Kune yekutanga meseji tinopindura "Hongu", kune wechipiri meseji tinopindura "Kwete".
Kuisa iyo template nezvigadzirwa kuPrestaShop
Kana tangoita nemazvo matanho apfuura ekuzadza template zvizere, isu tinoenderera mberi kupinza iyo zvigadzirwa muPrestaShop.
Iyo system yacho pachayo inotipa iyi sarudzo muchikamu:
Catalog uye tinya kurudyi iro rine meseji: Tumira zvigadzirwa kuPrestaShop
Sarudza mhando ye .CSV faira yekuisa. Mune ino kesi, zvigadzirwa zvawakatozadza
Isa iyo faira kubva pakombuta yedu uchitsvaga iyo mufaira iyo yakachengetedzwa.
Mutauro umo katuni yacho ichaverengerwa.
Sarudza kumisikidzwa kweiyo faira rekunyorera. Nechekusiya siya default, iine .CSV mafaera.
Dzvanya kuendesa CSV dhata.
Nenhanho idzi, dzinozokutorera imwe nguva uye kuzvipira pakutanga, unogona kurodha nhamba hombe yezvinyorwa panguva imwe chete, kunyangwe zvingaite sezvinonetesa paunotanga kuzviita, ipapo unozotanga kujaira iyo system, uye nzira yayo yekushanda.
Iwe uchazoona kuti zviri pamusoro tafura irimo yezviri mukati, iyo ichakubatsira iwe kubata yakawanda ruzivo rwakawanda zviri nyore, sezvo chimbo ichi chingaite senge chakaomarara pakutanga, asi chinokupa iwe zvakanakira sangano kana uchiisa chigadzirwa chako katarogu nekushambadzira pamhepo uchisvika kune vakawanda vatengi kupota pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekupinza zvigadzirwa kuPrestaShop
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ndine kusahadzika.
Ini ndakaisa zvimwe zvinyorwa zvine mubatanidzwa uye nemifananidzo yavo inoenderana, nekubatana.
Pakuburitsazve zvinyorwa (nekuda kwekuuya kwekutsiva kutsva), zvakakosha here kuisa ID yechinyorwa kana kuti chirevo chakakosha? (Ini ndaisa chirevo chechinyorwa seyazisi yadzo, ndisingaregi Prestashop ichizviita zvoga, handizive kana izvozvo zvichizopa dambudziko kana vagadziri vakasiyana vachishandisa zvakafanana revo yezvigadzirwa zvavo)
Zvakaitika kwandiri kuti ndakazviita sezvizvi uye ikozvino ndine eg 1 S Orenji, 3 S Orenji, 1 M Orange, 3 M Orange ... ndiko kuti, mubatanidzwa mutsva unowedzerwa, panzvimbo pekuwedzera.
Rimwe dambudziko nemifananidzo, kana saizi S, M, L, XL yeruvara rweorenji iine mifananidzo yakafanana (imwe kubva kumberi, imwe kubva kudivi, imwe kubva kumashure) kwemasayizi mana, ini ndine gumi nembiri mifananidzo pavara. Kana ndiine mavara matanhatu, ndine 12 mifananidzo.